सरकार र पार्टीहरु दुवै असफल भए, राजतन्त्र फर्किने बाताबरण बन्योः राणा |
कर्पोरेट नेपाल , २९ माघ २०७५, मंगलवार
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त)का अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणाले सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस दुवै असफल भएकोले राजतन्त्र फर्किन लागेको दावी गरेका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लवमा मंगलबार उनले भने, ‘यो एक वर्षमा सरकार पनि असफल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस पनि असफल भयो । दुवै असफल भए । उनीहरुले अवसरको सदुपयोग गर्न सकेनन् ।’
राणाले सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले मौकाको सदुपयोग गर्न नसकेको भन्दै थपे, ‘सरकार र कांग्रेस दुवै असफल भए । अब हाम्रो पालो आयो ।’ उनले दुवै असफल भएकोले मुलुकमा राजतन्त्र फर्किने घोषणा गरे ।
उनले नेपालमा राजतन्त्र पनि फर्किन सक्ने बाताबरण बन्दै गएको बताए । राणाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई तिहाईको मौकाको सही सदुपयोग गर्न नसकेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘उहाँ यो मौका प्रयोग गर्न असफल हुनुभयो । यो एक वर्षमा सरकारले के–के राम्रो काम गर्यो त भनेर पाना–पाना पल्टाईपल्टाई हेर्यौं भने मौका खेर फालेको पाईन्छ । सरकारले यो एक वर्षमा हाँसिल गरेका उपलब्धि शुन्य छ ।’
व्यापार घाटा पनि डरलाग्दो रहेको भन्दै राणाले भने, ‘आयातको दश प्रतिशत जति पनि निर्यात भएको छैन् । हरेक क्षेत्रमा सरकारले खास केही प्रगति गर्न सकेको छैन् । काम केही भएकै छैन् ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारमुक्त देश बनाउँछु भनेर सार्वजनिक भाषण गरेपनि व्यवहारमा त्यस्तो नभएको उनको आरोप छ ।
उनले बुढीगण्डकीको ठेक्का प्रक्रिया नै नगरी एउटा कम्पनीलाई किन दिईयो ? भन्दै यसरी दिँदा भ्रष्टाचार भयो कि भएन ? भनी प्रश्न गरे । कुटनीतिक क्षेत्रमा पनि सरकारले सन्तुलन कायम गर्न नसकेको राणाले आरोप लगाए । उनले भने, ‘अहिले कुटनीतिक सन्तुलन गुमेको छ । हामी एकतीर ढल्केका छौं ।’
उनले भेनेजुयला प्रकरणमा पनि वक्तव्य जारी गरेर अमेरिकासँग जोरी खोज्ने काम गरेको भन्दै सरकार तथा नेकपाको आलोचना गरे । राणाले भने, ‘भित्तासित कुहिनो ठोक्ने काम भयो । यस्तो गर्नुहुँदैन् थियो । भेनेजुयलासँग नेपालको दौत्य सम्बन्ध छ कि छैन मलाई त सन्देह नै लाग्छ ।’
महतको आरोप– सुखी नेपाली होइन, निराश नेपाली बनाइयो, बेरोजगार होइन कार्यकर्ता भत्ता बाँडिदैछ